Ikhabhinethi Enhle Ethokomele · I-Furnas Valley
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Danny
Ngo-413 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
Ukuhamba ibanga ukusuka ezindaweni ezikhangayo zemvelo e-Furnas, le khabhinethi ethokomele nenhle, etholakala endaweni ethule, ifakwe yonke into oyoyidinga ukuze uthole ulwazi ongeke ulukhohlwe, ukuthola enye yezindawo ezinhle kakhulu ongake uzivakashele...
Iyindawo ekahle yokukhosela yabashadikazi abakwazisa ukuxhumana nemvelo nokuthula noma abantu abathanda ukuzitholela izindawo ezintsha bebodwa.
Ukuthintwa komuntu siqu kwenza lesi sikhala esiyingqayizivele futhi sehluke ezindaweni eziningi oke wahlala kuzo, njengoba ifenisha eminingi nemihlobiso yenziwe yimina ngezandla, kuhlanganisa nombhede.
Le ndawo itholakala engxenyeni engenhla yedolobhana laseFurnas, indawo ethule ezungezwe uhlaza olumangalisayo nokubukwa kwezwe, ibanga lokuhamba ukusuka ezindaweni ezikhangayo zemvelo.
Amachibi ashisayo emvelo (womabili i-Poça da Dona Beija ne-Parque Terra Nostra) ayimizuzu emi-5 nje yokuhamba. I-hotsprings kanye nechibi le-Furnas yimizuzu engu-15 yokuhamba (noma imizuzu emi-5 ngemoto), futhi (cishe) ulwandle olungcono kakhulu esiqhingini (i-Ribeira Quente) luyimizuzu engu-15 nje yokuhamba.
Ngesikhathi sokungena othile uzobe ekwamukela (imvamisa mina noma abafowethu), ekhombisa futhi echaza konke odinga ukukwazi ngokuhlala.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho uzokwazi ukusithinta usebenzisa ingxoxo eyakhelwe ngaphakathi ye-airbnb, usishayele noma, uma kunesidingo, ungangqongqoza kwamakhelwane ukuze uhlole ukuthi ukhona yini umuntu ekhaya.
Ungabi namahloni... uma ubona umuntu ezungeza ngaphandle woza uthi Sawubona :)
Ngesikhathi sokuhlala kwakho uzokwazi u…
UDanny Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 2661/AL